NY Town dia mampiasa Dredge Ellicott vaovao hamerenana amin'ny moron-dranomasina- Ellicott Dredges
Ny tanànan'i New York dia hampiasa ny dredge Ellicott® Brand vaovao hamerenany ny moron-dranomasina taorian'ny rivo-doza
Desambra 1, 2009
Source: Elmontcivic.com / nosoratan'ny Administrator
Ny vondrom-piarahamonin'ny Point Lookout any amin'ny ranomasina dia tonga ny tafio-drivotra nor'easter vao haingana, nianjera hatramin'ny kianjan'ny 250,000 cubic teo amoron'ny moron-tsiraka. Niara-nientana tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny Freeport mpanao gazety i Hempstead Town Supervisor Kate Murray sy ny senatera Dean Skelos, mba hanao hetsika hiadiana amin'ny famoronana ny morontsiraka. Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa ny famoahana ny dredge an-tanàn-dehibe vao navoakan'ilay tanàna, izay nalaina tamin'ny alàlan'ny fanomezana senatera an'ny senatera Dean Skelos / Assemblyman Harvey Weisenberg, dia i Councilieomanie Angie Cullin, Mpitari-tsorim-paritra Mark Bonilla, Mpandray ny hetra Don Clavin sy mpitarika ny vondrom-piarahamonina sy lehiben'ny vondrom-piarahamonina. . Ny fanjonoana dia haka fasika avy amin'ny faritry ny fanangonana ary paompy ilay fitaovana mankany amin'ireo torapasika eo an-toerana.
"Ity làlana vaovao ity dia tena ilaina amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny morontsiraka sy ny fiarovana ny trano, orinasa ary mponina eto an-toerana," hoy i Murray. "Te-hisaotra ny senatera Dean Skelos aho amin'ny fahazoana ny famatsiam-bola ho an'io fitaovana lehibe io."
Hempstead Town dia nandray ny dredge, izay hiangona toy ny erector natsangana nandritra ny volana vitsivitsy ho avy ho fanomanana ny fanombohan'ny lohataona. Raha ny marina, nanampy an'i Murray sy Cullin tamin'ny fametahana ny sasany amin'ireo bolts voalohany ho ampahany amin'ny fivorian'ny sambokely.
Hempstead Town dia iray amin'ireo faritra tokana ao amin'ny faritra ihany no manana dredge midadasika ho an'ny famerenana ny torapasika. Ny dredge, boaty miasa ary fantsom-paty 8,000 hivezivezy sy hanentana ny fasika no novidiana tamin'ny vola 1.14 tapitrisa. Ny senatera Dean Skelos ao New York dia nahazo $ 1.1 tapitrisa dolara ho an'ny fividianana dredge ary nanolotra vola $ 41,000 fanampiny tao an-tanàna.
"Ny dredge an-dranomasina Hempstead Town dia ho fananana lehibe amin'ny fiarahamonina Point Lookout," hoy i Senatera Skelos. "Miaraka amin'ny fitaovana mety hanarenana fasika amin'ny morontsiraka sy hanamafy orina ny fako, hahafahantsika miaro ny mponina sy ny trano ary ny orin'asa amin'ny fandrahonana ny tafio-drivotra sy ny fipoahan'ny morontsiraka."
Hatramin'ny nivoahan'ny torapasika Point Lookout farany tamin'ny volana martsa 2008, teo anelanelan'ny 50 sy 75 tongotra amoron-tsiraka dia efa hianjera. Raha tokony hiantehitra amin'ny Tafika Amerikan'ny Tafika Amerikana mba hameno ny torapasika, dia afaka hamaha ny olan'ny torapasika haingana kokoa sy feno.
"Ity dia tombontsoa lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina Point Lookout," hoy i Councilulloman Cullin. "Ny trano sy ny orinasa dia ho arovana tsara kokoa amin'ny fandrahonana tafio-drivotra sy ny loza ateraky ny tondra-drano amin'ny alàlan'ny fanodinana sy ny famerenana amin'ny fasika ary ho azontsika atao mivantana izao."
Talohan'ny tetik'ady nataon'ny Corps of Engineers 2008 tamin'ny Martsa izay nandoto an'i Jones Inlet nipoaka ary nametraka ny fasika feno torapasika teny amoron-dranomasina, dia nandriaka ny fako sy ny ranon-dranomasina ny toby tondra-drano tao Point Lookout. Ny dredge dia hamela ny tanàna hamaha ny filàna lehibe, ao anatin'izany ny fanamafisana ny honko mba hisorohana ny fanimbana olona. Ny afovoan-pasika no faran'ny fiarovana farany eo an-tokotanin'ny ranomasina sy ny faritra, tranobe ary làlana, ary ny fanamafisana ny hantsana dia zava-dehibe amin'ny fiarovana ny aina sy ny fananan'ny vondron-dranomasina. Ankoatr'izay, ny dredge dia hameno ny ezaka ataon'ilay tanàna ho fanohanana ny tetikasa Long Beach Storm Reduction Projet ho fiarovana ny vondron'ireo vondron-tananana ao Long Island Island amin'ny alàlan'ny rivo-mahery sy onja mahery amin'ny alàlan'ny fananganana tohodrano vaovao ary hamafisina ny efa misy.
Ny tanàna dia manantena ny fihetsehana fasika avy eo amin'ny ilany avaratra-atsinanan'ny Point Lookout mankany atsinanana sy atsimo-atsinanan'ny vondron-dranomasina any amin'ireo faritra hafa. Ny dredge dia andrasana amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona 2010.
"Indraindray ny 'antitra mandoto' dia mety ho zavatra tsara, ary ny fasika izay hialantsika avy amin'ny fantsom-pifandraisana hamerenana ny moron-dranomasina izay tratry ny tafio-drivotra iray dia zavatra tsara tokoa ho an'ny mponina eny an-dranomasina sy ny tompona orinasa," hoy i Murray. "Te-hisaotra ny senatera Dean Skelos sy ny solombavambahoaka Harvey Weisenberg aho amin'ny fahazoana ny vola ho an'ity dredge ity sy ny mponina eto an-toerana izay mpiara-miasa aminay amin'ny ady amin'ny faravodilanitra."
Navoaka avy amin'ny Elmontcivic.com